Izindululo zethu ezivakalayo zangoLwesihlanu oMnyama 2019 | Iindaba zeGajethi
Iingcebiso zethu ezivakalayo zalo Mnyama ngoLwesihlanu 2019
UMiguel Hernandez | | Amazon, I zi ganeko, ngokubanzi
NgoLwesihlanu omnyama walo nyaka i-2019 ikufutshane nekona, nangona kunjalo, izithembiso zifika ngalo lonke ixesha ngaphambi kokubonelela ngezaphulelo kwiimveliso ebesikhe sazikhangela ixesha elide. Njengoko Kulo nyaka kwiActualidad Gadget sifuna ukukunceda ngakumbi kunakuqala, into esiza kuyenza kukudityaniswa okuncinci kwezona zixhobo zibalaseleyo ezinesandi kuwe, apho uya kufumana khona iihedfoni, izithethi ezikrelekrele kunye nentwana yayo yonke into. Fumanisa nathi ukuba zeziphi izibonelelo ezinomdla kakhulu ngesandi sangoLwesihlanu oMnyama kwaye uthathe ithuba lokuhlaziya iimveliso zakho ngexabiso elifanelekileyo.
1 I-Kygo A11 / 800 -Iifowuni eziphathwayo kunye ne-ANC
2 I-Sonos Hambisa-Isithethi esijikelezayo
3 Isithethi esiSmart Vuka-Iwotshi yeAlarm ene-Alexa
4 Ii-headphone zokubaleka kunye nezenziwe
5 Inyaniso IiNtloko ezingenazingcingo (TWS)
I-Kygo A11 / 800 -Iifowuni eziphathwayo kunye ne-ANC
Siqale ngemveliso ethandwayo, isandi sokurhoxisa ii-headphone. Sibe novuyo lokuvavanya ezi Kygo A11 / 800 kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo. Kuhlalutyo lwethu Sinexabiso elihle kakhulu lemali xa kufikwa kwimveliso, Sinokuzimela okuhle kakhulu kwii-headphone ezihlawuliswa ngoqhagamshelo lwe-USB-C kwaye enecala lokuthwala elibandakanyiweyo ebhokisini, ngaphandle koku isongelwa ngokupheleleyo, ke bathatha indawo encinci apho sifuna ukuzigcina khona. Sinepaneli yokuchukumisa ulawulo lwe-multimedia kunye nonxibelelwano lwejack ye-3,5mm yesandi se-analog.
Thenga uKygo A11 / 800
Itekhnoloji yeBluetooth yinguqulelo 5.0 inokuba kungenjalo njani kwaye uqwalaselo luzenzekelayo ngokupheleleyo. Ngomhla wama-28 kuNovemba olandelayo kude kube ngu-30 ku-Novemba odibana noMnyama ngoLwesihlanu, ezi ntloko ziya kuba nesaphulelo I-50% kwivenkile esemthethweni yaseKygo, kunjalo baya kuhlala kwi- € 150 kunye nokuthumela, isaphulelo esomeleleyo sisebenzisa le mihla ikhethekileyo. Khumbula ukuba ezi ntloko zinokuthengwa zombini zimhlophe kwaye zimnyama kwaye inemakrofoni ephindwe kabini ukuphendula ngokulula iifowuni.
I-Sonos Hambisa-Isithethi esijikelezayo
I-Sonos Move isithethi esikhethekileyo, isithethi sokuqala seBluetooth kwinkampani yaseSweden ekwanayo ezinye iimpawu ze-Sonos, ezinje: Ukunxibelelana neAmazon Alexa kunye noMncedisi kaGoogle, iSpotify Qhagamshela, idlalwe 2, ukumelana namanzi ... Nangona kunjalo, yenzelwe ukuba ukwazi ukuyibeka ngokwenyani naphi na apho ufuna khona, kuba inezibuko le-USB-C kunye nesikhululo sokutshaja esiya kusivumela ukuba siyise apho sifuna khona, ukuze sihlale sikhatshwa ngamandla ayimfuneko kunye nomgangatho ophilileyo, onje ngegadi yethu okanye awona manyano wethu.
Thenga iNonos Hambisa nge- € 339
Ukongeza, uSonos ulungiselele ingqokelela yezibonelelo zoMnyama ngoLwesihlanu kunye noMvulo weCyber:
I-Sonos One SL -30 €, 169 €
Icandelo € 699 -100 €, 699 €
Esi sandisi-lizwi sinobungakanani obucekeceke kwaye sinobunzima obuqulathiweyo sijonga amandla aso. Ukuba siyibeka kwisiseko sayo, yi-Sonos yendabuko, kodwa ukuba siyikhupha kwaye siyidibanise ngeBluetooth sinesithethi ngaphandle kwemida. Ungalubona uhlalutyo lwethu olunzulu kunye nevidiyo yethu ukuba ufuna ukuyazi ngokusondeleyo. Ifemu yaseSweden iya kuba nentengiso yayo ngoLwesihlanu oMnyama kwiwebhusayithi yayo, ukongeza kwizaphulelo esizifumana kuthotho lweemveliso zabo ezithengiswe eAmazon.
Isithethi esiSmart Vuka-Iwotshi yeAlarm ene-Alexa
Ngaba unokucinga ukuba uyakwazi ukususa itshaja, iwotshi yealam kunye nesithethi kwitafile yakho esecaleni kwebhedi kwinto enye? Yonke loo nto kunye nangaphezulu kweSistem yezaMandla ikunika esi Sithethi siSmart Sokuvuka, isithethi esili-alamu kwaye kwangaxeshanye isiseko sokutshaja ngaphandle kwamacingo kunye nomgangatho weQi. Kodwa inezinto ezininzi ezisebenzayo, ungathatha ithuba ngetekhnoloji ye-Bluetooth 5.0 okanye amanqaku ayo eMultiroom ukuze ukwazi ukuyidibanisa nezinye iimveliso kuluhlu. Ngendlela efanayo, sifumana isithethi esine stereo esingu-2.0 esaneleyo nesaneleyo ukugcwalisa igumbi elinombulelo womculo kwiSpotify Connect.
Thenga iSomlomo eSmart Vuka
Esi sithethi siyafumaneka kwiAmazon kananjalo kwiwebhusayithi ye-Energy Sistem apho benza khona izaphulelo ezinkulu ngoLwesihlanu oMnyama kwiimveliso zeSmart Sepaker ezinje nge 5 Ekhaya kunye Inqaba ende, Ayikhe ibabuhlungu ukujonga ukubona ukuba ezinye zeemveliso ezihambelana ne-Alexa zinokuba yinxalenye yekhaya lakho. Ngokunyaniseka, ngeli xabiso ithathe indawo yeemveliso ezimbalwa ezisoloko zisetafileni kwaye iya kuba yinto ebaluleke kakhulu kwimini yakho, kuba yiwotshi yealam kwaye iya kukukhumbuza ntsasa nganye ukuba uye emsebenzini .
Ii-headphone zokubaleka kunye nezenziwe
Into endizisela yona ngoku yile ingqokelela yee-headphone zokubaleka okanye ezemidlalo ngokubanzi, Kwaye kukuba olu hlobo lomsebenzi ngokuqinisekileyo alusebenzi ngalo naluphi na uhlobo lwee-headphone, njengoko kusengqiqweni, kuba kufuneka ukuba ukongeza ekubambeni kakuhle endlebeni banokumelana kakuhle neziphene zolu uhlobo lomsebenzi. Kwi-Gadgetid ye-Actualidad sihlalutye, umzekelo, i-headphone efanelekileyo, ngoko ke sishiya iqoqo elincinci:
Uvukelo olutsha ine izaphulelo ezizodwa e-El Corte Inglés
Amandla eSistem yangaphandle Ibhokisi yesitalato ukusuka kwi- € 99,50
I-Ultimate Ears Boom 3, esinye sezona zithethi zibalaseleyo zingenazingcingo kwimarike ngesaphulelo esihle, sihlala kwi- € 84,99
Inyaniso IiNtloko ezingenazingcingo (TWS)
Mva nje ii-headphones ze-TWS ziyimveliso yeenkwenkwezi, kwiGadget yeActualidad sikwazamile neqaqobana loku. Ndifuna ukuqaqambisa kuqala IiTicPods zasimahla ezivela kwiMobvoi, ii-headphone ezikumbala wazo omnyama zii-euro ezingama-71,12 kuphela esisaphulelo phantse sama-50% kwixabiso lokumiliselwa. Zii-headphone ezingenazingcingo ngokupheleleyo ezinokunganyangeki kwe-IPX5 kunye nolawulo lokuchukumisa phakathi kwezinye izinto ezininzi ezisebenzayo, jonga kuhlalutyo lwethu ukuba ufuna ukubazi nzulu kancinci.
Nathi siyakushiya Iifowuni ze-TWS ukuba sizamile mva nje kwaye sinazo nezaphulelo, banomdla kakhulu kunikwa ixabiso labo.
IArbily G9: I-Bluetooth 5.0 yeendlebe ezinokuxhathisa ukubila, ngaphezulu kweeyure ezingama-20 ngebhokisi yokutshaja, iimakrofoni kunye nokucinywa kwengxolo, Akukho mveliso ifunyenweyo
Ewe, le ibiyingqokelela yethu yezithethi ezincinci kunye nehedifoni kwiActualidad Gadget yalo Lwesihlanu Omnyama, sicebisa ukuba uhlale ulumkile kuba izaphulelo ezinomdla ngakumbi zizakufika kwaye sizakuhlala sizipapasha, iveki kaLwesihlanu omnyama ilapha kwaye kufuneka usebenzise yona. Ukuba uyazi ezinye izibonelelo okanye unemibuzo, yisebenzise ibhokisi yezimvo kwaye ujoyine itshaneli yethu yeYouTube, kwaye silandele Twitter ukuba ufuna ukwaziswa ngeendaba ezilungileyo kwinqanaba lobuchwephesha, kunye nohlalutyo lwamva nje lwazo zonke iintlobo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Amazon » Iingcebiso zethu ezivakalayo zalo Mnyama ngoLwesihlanu 2019
Iindlebe zokugqibela zongeza ukudityaniswa kweSpotify kwiQhosha loMlingo
Senza udliwanondlebe noFabián Gumucio, intloko kaRakuten Kobo eSpain